ကမ္ဘာရွာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကမ္ဘာရွာ
Posted by Ma Ma on Jun 3, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 10 comments
တစ်နေ့တစ်နေ့ ရွာထဲဝင် ပိုစ့်အသစ် ဘာတွေတက်ထားလည်း လျှောက်ဖတ်ရတာနဲ့ အလုပ်ချိန်တွေလည်း ပွန်းပဲ့ကုန်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့်လည်း မနေနိုင်တော့ ဖတ်ပြီးတာနဲ့လည်း မကျေနပ်နိုင်ပဲ ကွန်မန့်တွေကိုလည်း ရေးရပါသေးတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ထဲရှိတာတွေ ဖော်ပြခွင့် ဒီမိုကရေစီကိုလည်း သဂျီးက အပြည့်အ၀ပေးထားပါသေးတယ်။
ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်ရွေးဖတ်ဆိုပေမယ့် မကြိုက်တာတွေကိုလည်း အသစ်တက်တာဖတ်ရင်း ဖတ်မိသွားပါသေးတယ်။ ကိုယ့်ခံစားချက် သူ့ခံစားချက် ရင်ဖွင့်တာတွေ၊ ရင်နင့်စရာတွေ၊ ပြင်သင့်တာတွေ၊ ဆင်ခြင်သင့်တာတွေ သိရ၊ ဖတ်ရ၊ လေ့လာရလို့ စိတ်တွေလည်း အရောင်စုံသွားရပါတယ်။
ကိုယ်မကြိုက်ရင် သဂျီးကိုလည်း မချန်၊ ရွာသားအချင်းချင်းလည်းနှံ၊ ဒါရွာရဲ့ထုံးစံ။ မကြိုက်ရင် လှည့်ပြန်လို့ မပြောရုံတမယ်။ ခင်မင်သူတွေကြတော့လည်း ရွာထဲမှာပါမက ရွာပြင်မှာပါ တွေ့ချင်ကြပြန်ရော။ အရက်သောက်သူ၊ စကားများသူ၊ သတ်သတ်လွတ်စားသူ၊ ပုံပြောသူ၊ ခရီးသွားမှတ်တမ်းရေးသူ သူသူသူသူသူသူသူ………. စုံလင်လို့ပါပဲ။
အဲဒီရွာအကြောင်းကို ပြောဖြစ်တော့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း ရွာသူရွာသားတွေ ဖြစ်ရပြန်ပါတယ်။ ရွာအကြောင်း၊ သဂျီးအကြောင်း၊ ရွာသူရွာသားတွေအကြောင်း ပြောဖြစ်တော့ အမေက- ဟဲ့ ဘယ်ကရွာလဲ။ ခုခေတ်မှာ သူကြီး ရှိသေးလို့လား တဲ့လေ။ သြော် ကမ္ဘာ့ရွာ ကမ္ဘာ့ရွာ ကမ္ဘာ့ရွာ ကမ္ဘာ့ရွာ။ [member-invites-form]
ဒါပေါ့ မမရေ ..နည်းပညာတွေ တိုးတက်ထွန်းကားလာချိန်မှာတော့ ကမ္ဘာကြီးဟာ ရွာတစ်ခုလိုပဲ ဖြစ်သွားပါတယ်… ။ နီးသလား ၊ ဝေးသလား ကြိုက်တဲ့နေရာသွား အင်တာနက်သုံးလို့ရလျှင် အန်းတား တချက်ခေါက်တာနဲ့ ချက်ချင်းဆက်သွယ်လို့ရတယ်… ယခင်ကလို နိုင်ငံခြားနဲ့ စာပို့လျှင် တစ်လ လောက်စောင့်စရာမလို … စာဖောက်ဖတ်မှာလည်း မပူရ… စာထဲ၊ ပို့စ်စကဒ်ထဲ ထည့်ပို့တဲ့ အစိမ်းလေးများဆိုလျှင် တိပ်နဲ့ကပ်တာတောင် ခွာယူထားတယ်…ကိုယ်တွေ့ပဲ… ။ တစ်ခါတစ်လေ စာထဲမှာ အစိမ်းပါတယ် ထည့်ရေးလျှင် အဲ့ဒီစာပါဖြောင်ပါတယ်… ။ နောက်တစ်ခုက ရန်ကုန်မြို့တွင်းစာပို့တာတောင် ဖောက်ဖတ်ပါတယ်။ ထရိတ်ဒါးမှာ တည်းတဲ့ဧည့်သည်က supriseဖြစ်အောင် ပို့စ်ကဒ်ပို့လိုက်တယ်.. ဘာအစိမ်းမှမပါတာတောင်… တစ်စောင်က ပျောက်တယ်… နောက်တစောင်က ပုိ့တဲ့ လူပြန်သွားလို့ နောက်တခါ ပြန်လာလည်တော့မှ ရတယ်…ကောင်းကြသေးရဲ့လား။ ဒီမှာတော့ ဒီလိုချည်းပဲ …။ တခြား နိုင်ငံတွေမှာ စာပို့တဲ့အခါ ဥပဒေရှိပါတယ်တဲ့ ..ဖောက်ရာလေးများပါလာလျှင် ပြသနာ အကြီးကျယ်တတ်တော့တာပါပဲတဲ့ရှင်…ဒီမှာတော့ စာတောင်ဖြောင်တတ်ပါသေးတယ်… ။ အင်တာနက်တွေ တိုးတတ်လာတော့ … အများကြီး အဆင်ပြေသွားပြီ ။
နေ့လည်ကတည်းက ၀င်မန်းနေတာ မတတ်ဘူးဖြစ်နေတာ.. ဒါနဲ့ ကော်ပီကူးပြီး အခုပြန်တင်တာ့မှ မန်းလို့ရသွားတယ် … ။
ဒါလည်း စာပျောက်နည်း တမျိုးပဲ နေမှာပေါ့
ပြည်တွင်းသတင်းများ ကမ္ဘာ့သတင်းများ ။ မှုခင်း များ ။အတွေးအခေါ်များ ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်အပျက်များ ပုံပြင်များ မှတ်တမ်းများ ကိုယ်တိုင်စဉ်းစား ရေးသားထားသော own creation များ ။ ခပ်တည်တည်ခိုးကူးထားသော စာများ ။ တိုင်စာများ ။ ကဗျာ များ ဆောင်းပါးများ ဝတ္ထုများ အို စုံနေတာပဲ ဗျာ ။ ဖတ်ရပါတယ် ။ ကိုယ်တိုင် လည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးခွင့် ပေးထားတဲ့ mg ကို facebook ထက် ပို စွဲ သွားတာတော့ အမှန်ပဲ ဗျို့ ။
တစ်နေ့တစ်ခေါက် မရောက်ရရင်မနေနိုင်အောင် စွဲဆောင်ထားတဲ့ ကမ္ဘာရွာပါပဲ။စာဖတ်ချိန် အိပ်ချိန်တွေခိုးသွားတာလည်း ဒီရွာပဲပေါ့။
အိပ်မရတဲ့ညပေါင်းတွေရယ် ၊ နှစ်ရက်လတို့ရှည်ကြာညောင်းပြီကွယ်၊ မန်းဂေဇက်ကအချိန်တွေ တောင်းယူတယ်…..။
အစကတော့ ဖိုရမ်မှာ စာရေးရင်း နဲ့ လင့်ကလေး တခုကို နေရာတခုက ရပြီး ၀င်ရေးတယ်။
၃ရက်လောက်မှ ပိုစ် ၁ခု လောက် တက်ခဲ့တယ်။ တက်တဲ့ ပိုစ်က ကိုပေါက် မန်း ရေးတဲ့ ပိုစ်တွေ.. နားစည်ထိုးထွင်း ပိုစ်တွေ ခဏခဏ မြင်နေရတယ် အပိုင်းတွေကလည်း များတာကိုး..
နောက်ပိုင်း ရေးနေကျ ဖိုရမ်က ခဏခဏ ကျကျ သွားလို့ ပျင်းတာနဲ့ လိုက်မန်းရင်းနဲ့ ရန်တွေဖြစ်.. ပွဲတွေဆူ ဒုတ်ဓါးထမ်းပြီး မန်းရင်ကနေ သဂျီးကိုလည်း မချန် စကားများ..
စပြီး ဒီဆိုက်ကို ၀င်တုန်းက သဂျီးက တော်တော် ရိုးတယ် ထင်ရတယ်.. အားလည်း တော်တော် နာတတ်တယ် ထင်တာ.. အခုတော့ သိသွားပြီး.. ရွာသဂျီးက ရုပ်ဝါဒီ အစစ်ဖြစ်နေတာသိလာတယ်။ သဘောတော့ အခုထိ ကောင်းတယ်လို့ မြင်တာပဲ.. ဟီးဟီး..
(သဘောတော့ အခုထိ ကောင်းတယ်လို့ မြင်တာပဲ. ) ဆိုတော့ နောက်ပိုင်းတော့ မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ :D